समृद्ध नेपाल निर्माणका आधारहरु – kumarpanta.com
समृद्ध नेपाल निर्माणका आधारहरु
गैर आवासीय नेपाली अभियानका क्रममा जहाँ पुग्छु मलाई लाग्छ नेपाल बाहिर अर्को नेपाल छ। त्यो मध्यपूर्वको गर्मीमा पसिना बगाउने नेपाली होस् अथवा उत्तर अमेरिकी जीवनयापन गर्ने। अफ्रिकामा काम गर्ने नेपाली होस् अथवा युरोपमा, व्यवसाय गर्ने। सबैसँग नेपाली भावना उत्तिकै छु, उत्तिकै नेपालप्रतिको स्नेह छ। अहिले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक करिब १५ सयका दरले नेपाली युवा विदेश पलायन भइरहेछन्। उनीहरुको नेपाल छोड्ने क्रमले नेपालबाहिरको नेपाली समाज अझ बलियो हुँदै गएको छ, अझ फैलिँदै गएको छ।
विशेषगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालीहरु विदेशिन थालेका हुन्। नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले नै धान्दै आएका छन्। काम र अब्बल शिक्षाको खोजमा विश्वका विभिन्न देशमा अहिले ५० लाखभन्दा बढी नेपालीहरु बसोबास गर्छन्। यिनै नेपालीहरुले पठाउने रेमिटेन्स अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत गैरआवासीय नेपालीले पठाएको पैसाले धानेको छ भन्दा मलाई हर्ष र विस्मत दुवै हुन्छ। खुशी यस मानेमा गैरआवासीय नेपाली साथीहरुको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अब्बल छ भनेर। दुःख यस अर्थमा कि नेपाल सम्वृद्ध पार्न सकेको भए यो सबै जनशक्ति यतिबेला स्वदेशमै रहने थियो।
हाम्रो देशको व्यापार घाटा निकै कहालीलाग्दो अवस्थामा छ। ७० अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने नेपालको आयात भने ठूलो रकममा हुनेगर्छ। तपाइँहरुलाई पत्याउन गाह्रो पर्ला तर यो वास्तविकता हो नेपालले वर्षेनी १३५ अर्ब रुपैयाँ तेल किन्नमै सिध्याउँछ। जलविद्युत्को अथाहा सम्भावना भए पनि त्यसको उत्पादन र व्यवस्थापन नहुँदा नेपाल उर्जाका लागि इन्धनमा निर्भर हुन बाध्य छ। युवा विदेशिने क्रमले अलैँचा र कृषि सम्भावना भएको हाम्रो भूमि बाँझो हुने अवस्थामा पुग्दैछ। नेपाल अब करिब करिब बुढाहरुको मात्र देश हुने हो कि भन्ने चिन्ता सुरु हुन थालेको बेला आजभन्दा १४ वर्षअघि सम्वृद्ध नेपाल निर्माणको लक्ष्य बोकेर गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना भएको थियो। अहिले एनआरएनए ७५ देशमा फैलिएको छ। विश्वमा कुनै पनि देशको डायस्पोरा यति ठूलो भएको इतिहास छैन। एक दशकभन्दा लामो यो अभियानमा म सुरुवाती दिनदेखि नै सहभागी छु। गैरआवासीय नेपाली संघले विश्वका विभिन्न कुनामा छरिएका नेपालीलाई एकताको सूत्रमा कस्ने काम गर्दै आएको छ।
एनआरएन अभियान किन र के का लागि ? यो प्रश्न कहिले कहीँ साथीहरुले उठाउनुहुन्छ। मलाई लाग्छ एनआरएन अभियानको एउटै उद्देश्य छ— सम्वृद्धि नेपाल निर्माणका लागि एउटा साझा सञ्जाल निर्माण। दोहा अथवा दुवई विमानस्थलको ट्रान्जिटमा तपाइँलाई अरु मुलुकको नागरिकभन्दा बढी केरकार गरिन्छ किन? यसको सोझो जवाफ छ— हामी गरिब भएर। यदि हामी सम्वृद्ध मुलुकको नागरिक थियौं भने पासपोर्टको पानामा लेखिरहनु पर्ने थिएन होला– राहदानीबाहकलाई बिना रोकटोक हिँडडुल गर्न दिनु।
सम्वृद्ध नेपाल त्यसै बन्ने होइन। त्यसका लागि सीप, ज्ञान र पूँजीको परिचालन महत्वपूर्ण पक्ष हो। सम्वृद्ध नेपालको आधार पनि यिनै विषय हुन्। विदेशमा बसेर आर्जन गरेको यो एकीकृत पूँजी संसारभर छरिएर रहेका नेपालीले एउटै साझा मञ्चमा उभिएर परिचालित गर्न सक्नु अहिलेको चुनौती हो। र यही नेपालको आवश्यकता पनि हो। अमेरिकामा मात्रै करिब ५ लाख नेपाली बसोबास गर्छन्। हाम्रो जात फरक हुनसक्छ, राजनीतिक आस्था फरक हुनसक्छ, क्षेत्र र भाषा फरक हुन सक्छ। यी तमाम विषयहरुका बीचबाट गैरआवासीय नेपाली संघले विश्वभरिका बहुलवादी नेपालीहरुलाई एकै छातामा समेट्दै आएको छ। भूकम्पको विपत्मा हामीले त्यही स्पिरिटमा काम गरेको उदाहरण म यतिबेला स्मरण गर्दैछु।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा फैलिए पनि गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालय अहिले काठमाडौंस्थित नेपाल उद्योण वाणिज्य महासंघले प्रदान गरेको कोठाबाट सञ्चालित छ। अर्थात् हाम्रो आफ्नै भवन छैन। एफएनसीसीआईले निक्लेर जाउ भनेमा हामी कहाँ जाने ठेगान छैन। त्यसैले हामीले आफ्नै भवन निर्माणको सोचलाई मूर्तरुप दिने तयारी थालेका हौं। आफ्नै भवनको लागि जग्गा किन्ने र इन्जिनियरिङ डिजाइन सकिइसकेको छ। भवन निर्माणका लागि अहिलेसम्म १९ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ। यो मध्येको अधिकांश हिस्सा जग्गा प्राप्तिका लागि खर्च भइसकेको छ। त्यसैले भवन निर्माणका लागि अहिले रकम खाँचो छ। यसअघि नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका साथीहरुलाई म रकम उपलब्ध गराइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। यो बाहेक बागमती किनारमा एनआरएनएले एउटा पार्क निर्माण गरिरहेको छ। आगामी अक्टोबरमा उद्घाटन गर्नेगरी त्यो पार्क निर्माणको काम भइरहेको छ।
अमेरिकाका साथीहरुसँग संस्थाको अपेक्षा बढी नै छ। यहाँको हाम्रो समुदाय धेरै अर्थमा सम्वृद्ध छ। अर्को त अमेरिकामा रहेका साथीहरुको एकता यो संस्थाका लागि अझ महत्वपूर्ण छ। सबैको संस्था बनाउन दिशामा अमेरिकामा रहेका तपाइँ नेपालीहरु उदाहरण बन्नु हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ।
सबैको एउटै सपना विकसित नेपाल
एनआरएनए उपाध्यक्ष कुमार पन्त क्यानाडामा